Shiinaha DL-Methionine CAS 59-51-8 loogu talagalay soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha (FCC / AJI / UPS / EP) | Salaad
DL-Methionine CAS 59-51-8 ee Fasalka Cuntada (FCC / AJI / UPS / EP)
Magaca Badeecada: DL-Methionine
CAS MAYA.: 59-51-8
DL – methionine (Abbreviated Met) waa mid ka mid ah 18ka amino acids ee caadiga ah, iyo mid ka mid ah sideeda amino acids ee lagama maarmaanka u ah xayawaanka iyo jidhka qofka. Waxaa badanaa loo isticmaalaa sida cunnada lagu daro ee kalluunka, digaagga, doofaarrada iyo cuntada lo'da si loo ilaaliyo xoolaha iyo shimbiraha inay caafimaad ahaan u koraan. Waxay hagaajin kartaa dheecaanka caanaha lo'da, waxay ka hortageysaa inay dhacdo hepatosis. Ka sokow, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa daawooyinka amino acid, xalka cirbadeynta, faleebada nafaqada, wakiilka beerka difaaca, cirrhosis beerka daaweynta iyo cagaarshowga sunta ah.
DL-methionine waxaa loo isticmaali karaa isku-dhafka fiitamiinada daawada, nafaqada nafaqada iyo waxyaabaha lagu daro cuntada.
DL-methionine waa mid kamid ah qaybaha ugu muhiimsan ee soosaarida amino acid iyo iskuxirka amino acid. DL-methionine wuxuu leeyahay shaqeynta beerka ka hortagga dufanka. Adoo ka faa'iideysanaya shaqadan, fiitamiinada daawada ah ee loo yaqaan "synthetic" daawooyinka ayaa loo isticmaali karaa sidii loogu diyaar garoobi lahaa ilaalinta beerka
Maaddaama ay tahay amino acid muhiim u ah jirka bini'aadamka, DL-methionine waxaa loo isticmaali karaa in lagu daro nafaqada nafaqada iyo ka hortagga cuntada sida wax soo saarka keegga kalluunka.
Lagugu daro quudinta xoolaha, DL-methionine waxay ka caawin kartaa xayawaanku inay si dhakhso leh u koraan waqti gaaban isla markaana qiyaastii 40% quudintooda waa la badbaadin karaa.
Maaddaama ay tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah isku-darka borotiinka, DL-methionine waxay saameyn difaac ku leedahay muruqa wadnaha. Isla mar ahaantaana, DL-methionine waxaa loo rogi karaa Taurine baaruud, halka Taurine uu leeyahay saameyn muuqata oo aad u muuqata. DL-methionine sidoo kale waxay leedahay shaqo wanaagsan oo loogu talagalay ilaalinta beerka iyo sunta sunta, sidaas darteed waxaa badanaa loo isticmaalaa daaweynta bukaan socodka ee cudurrada beerka sida cirrhosis, beerka dufanka leh iyo noocyo kala duwan oo cagaarshow ah oo ba'an. Waxay leedahay saameyn aad u wanaagsan.
Nolosha, DL-methionine waxay ku badan tahay cuntooyinka sida abuurka gabbaldayaha, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, khamiirka, iyo algae.
saafi ah & midab la'aan
Biraha culus (Pb)
Hore: L-Tryptophan CAS 73-22-3 Loogu talagalay Fasalka Quudinta
Xiga: L-Isoleucine CAS 73-32-5 Fasalka Cuntada (AJI USP EP)
L-Valine 72-18-4, 73-32-5 L-Isoleucine, Fasalka Cuntada L-Threonine, Fasalka Farmashiyaha L-Leucine, Fasalka L-Threonine Pharm, Nafaqada xoolaha,